GABAY HAGAR ISLAAM
Mubashir Sheekh C/laahi
Ujeedada gabaygani waa Sida ay Muslimiintu isu hagradeen iyo sida gaalo aysanba u ahayn kuwo xishooda, oo taasi waxaa ku tusaysa dowlada Mareykanka oo sheegata awood badan inay layso dad masaakiin ah oo xoolo dhaqato ah ay misana xasuuqdo ayaga iyo maalkoodaba. Waa yaabe talow ma waxaa lagu heystaa maxaad wadankiina ujoogtaan ? waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed meesha lagu dhibsaday joogitaanka ay joogaan sidaa darteedna dagaal badheedh ah looga tirtirayo dhulkoodii hooyo si loo dhaxlo mustaqbalka dhow.
Meel kastoo aad ka fiiriso waa unsidaa taariikhdu ilaa iyo bariga dhexe ilaa iyo halkan geeska africa ah Muslim unbaa isku hagraday oo iska hiiliyay ee waxani gaalo kuma aysan sameyn karteen umadaha Islaamka ah. Hadii soomaaliya loosoo noqdana dee cid walbaa maanta markhaati ka ah in Soomaali ayada iska hiilisay oo cadow iyo caade qaate isugu yeedhatay.
Gabaygu waa mid wax ka xusaya taariikhda colaadeed ee udhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Ethiopia iyo waliba meelo kamid ah oo uu dib ugu laabanayo taariikhdii madowga iyo cadaanka ama Africa iyo gumeystihii reer Yurub. asagoo beydada dhowr ah ka maqanyihiin sababa jira awgood ayay tixdii gaabneyd ee Hagar Islaam tidhi sidan:
Mirta dirir majiiraha dagaal maagis iyo duulis
Maryo iyo midiyo dhiigleh iyo meyd laguriwaayo
Military hubweynliyo jabhado cadowga meeteeya
Madaafiicda darandoorigiyo mootarro is-heysta
Miinada wax riiqdiyo gantaal miiga lagu tuuro
Maxas iyo masaakiin qaxdiyo maati kala guurto
Maroor iyo lugooyiyo dhibiyo maaro kalawaayis.
Maantiyo halkii iyo Gurey baaqyadii Maxamed ( Imaam Gurey & Sayid Maxamed )
Mudaniyo marwiyo wiilyar iyo duqay maqaawiir ah
Inta magaca soomaaliyeed meel isugu keeno
Iyo Minilik gaaskuu watiyo reer Maryama xeyle
Mudo aanyareyn baa ogow muran dhextaagnaaye
Oo mooska lay sugu jiriyo mool ciriiriyahe
Malkadana rag wada daadsanaa labada meeloode.
Markaan Herer mulkinay iyo dalkii la'isku maansheeyey
Kuwii midigta laadlaadiyee muuqday dhabarkoodu
Muqdishiyo kismaayiyo haday maagi baladweyne
Marko iyo haday Jowhar iyo baydhaboba meeri
Mudug iyo hadaad Gaalkacyaba maabka qabadsiisan
Ooy muhatay laabtoodu way malo qasaareene.
Malezow nin malagii galoo mootan baadtahay dheh
waxaad naga macaashataana waa mooyi seynoqone.
Taariikh maguuraan ah iyo meertadiyo jiilka
Madow iyo cadaan xaajadii laysku mari waayay
Hadii la is maquuniyay kuwii muruqa loosheegtay
Kolkii lays marsaday xeerkanaan moogan soconeynin
Marta inaanan qaayibin xaqaa noo marqaatiyahe.
Soomaaliya waxay madi utahay murug aduunyaade
Wax Mareykan nala doonayaa mashaqo weeyaane
Ethiopia waxay magansantaa kay maciin bidaye
Muslim bays hagraday gaalna waa midaan xishooneyne
Faafin: April 9, 2007